ဇော်ထက်မောင်၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
Started this discussion. Last reply by ကိုကျော်သန်း Jun 25, 2015. 38 Replies5Likes
လောကမှာ ကိုးကွယ်စရာ ဘာသာတွေများစွာရှိပါတယ်။ ကိုယ်သန်ရာသန်ရာကို ကိုးကွယ်ကြလာတာ လူတိုင်းလူတိုင်း(အားလုံးကိုမဆိုလို) ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲမှန်တယ်၊ တခြားကိုးကွယ်သူတွေက…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
"ကုသလောဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ အာရမ္မဏပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဒါနံ ဒတွာ သီလံ သမာဓိယိတွာ ဥပေါသထ ကမ္မံ ကတွာ တံ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ အာရဗ္ဘ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဝိစိကိစ္ဆာ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဥဒ္ဓစ္စံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒေါမနဿံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။ ပုဗ္ဗေ သုစိဏ္ဏာနိ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ အာရဗ္ဘ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဝိစိကိစ္ဆာ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဥဒ္ဓစ္စံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။ ဈာနေ ပရိဟီနေ ဝိပ္ပဋိသာရိဿ ဒေါမနဿံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။"
မယ်သီတာ သည်ဇော်ထက်မောင်'s ၏ 'ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားရှင် ထံတော်တွင်အစဦးဆုံးအနေဖြင့် အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသော နိယတဗျာဒိတ်ကိုခံယူတော်မူခြင်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
phyuthi သည်ဇော်ထက်မောင်ကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်ဇော်ထက်မောင်'s ၏ 'ရွှေမြန်မာတို့ သတိပြုစေဖို့' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ကိုကျော်သန်း replied to ဇော်ထက်မောင်'s discussion 'ဘယ်တရားက အမှန်ဆုံးလဲ'
"စာအုပ်ထည်း ကစာ လမ်းညွန်ပြတယ် လိုက်မပုိနိုင်ဘူး ကိုတိုင်လုပ်ကြည်မှ ခက်ခဲပေါင်းစုံကြားမှာ မမြဲတာ အဆုံးမြင်အောင် ကြည်နိုင်မှ ဖြစ်မယ်"
"လူဆိုတာ အတ္တအများဆုံး ပါ ဒါ့ကြောင့် များသောအားဖြင့် ကိုယ်လုပ်တာမှန်တယ် ငါ့ဘာသာ ငါ့အယူဝါဒ ငါ့ဥစ္စာ .. အနဲဆုံးအဆင်.ကတော . ငါပြုပ်မှအေးမယ်"
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး replied to ဇော်ထက်မောင်'s discussion 'ဘယ်တရားက အမှန်ဆုံးလဲ'
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်ဇော်ထက်မောင်'s ၏ 'ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးရဲ့ အတွင်းရန်သူများ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်ဇော်ထက်မောင်'s ၏ 'ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် ဂိုဏ်းကွဲများ ပထမပိုင်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒီဘလော့ကို အောက်တိုဘာ 23, 2014 တွင်9:02pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
လူ့ဘ၀ သို့မဟုတ် ပျော်စရာများနှင့်
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 25, 2014 တွင်9:16pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 13, 2014 တွင်9:46pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment4Likes
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 6, 2014 တွင်9:23pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
အဆူဆူသော ဘုရားရှင်တို့ ဟော်တော်မူသည့် သြ၀ါဒပါတိမောက်တော်
ဒီဘလော့ကို မတ် 21, 2014 တွင်9:25pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ အိမ်လည်ထွက်ကြရအောင်
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 2, 2014 တွင်6:04pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments2Likes
ဒီဘလော့ကို ဒီဇင်ဘာ 29, 2013 တွင်8:09pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
ဒီဘလော့ကို ဒီဇင်ဘာ 5, 2013 တွင်10:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments4Likes
ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားရှင် ထံတော်တွင်အစဦးဆုံးအနေဖြင့် အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသော နိယတဗျာဒိတ်ကိုခံယူတော်မူခြင်း
ဒီဘလော့ကို ဒီဇင်ဘာ 1, 2013 တွင်10:25pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment2Likes
ကဿပမြတ်စွာဘုရားရှင် ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
ဒီဘလော့ကို ဒီဇင်ဘာ 1, 2013 တွင်10:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment 1 Like
ကောဏာဂါမနမြတ်စွာဘုရားရှင် ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
ဒီဘလော့ကို နိုဝင်ဘာ 20, 2013 တွင်8:10pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment2Likes
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် ကကုသန္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
ဒီဘလော့ကို နိုဝင်ဘာ 17, 2013 တွင်8:59pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments2Likes
ဒီဘလော့ကို နိုဝင်ဘာ 17, 2013 တွင်1:21pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments3Likes
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် ဝေဿဘူမြတ်စွာဘုရားရှင် ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
ဒီဘလော့ကို နိုဝင်ဘာ 12, 2013 တွင်6:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment3Likes
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် သိခီမြတ်စွာဘုရားရှင် ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
ဒီဘလော့ကို နိုဝင်ဘာ 10, 2013 တွင်10:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments2Likes
8:46pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 9, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:34am အချိန်သြဂုတ် 5, 2014, တွင် ဂျူလိုင်မိုး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:27pm အချိန်ဇွန် 11, 2014, တွင် Thein Naing Ohn မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကိုဇော်ထက်မောင်ရေ၊ ကျွန်တော်တင်တဲ့ တရားတော်ရဲ့ စာအုပ်ခေါင်းစဉ်က ဆရာတော်ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ၏ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း ပါ။
10:02pm အချိန်ှဧပြီ 13, 2014, တွင် Thein Naing Ohn မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
5:42pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 12, 2013, တွင် ခင်လေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
3:18pm အချိန်ဇွန် 28, 2013, တွင် anattā မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:17am အချိန်မေ 26, 2013, တွင် yarmoe မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
8:13pm အချိန်ှဧပြီ 2, 2013, တွင် စိုးလေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မင်္ဂလာပါ ညီလေးဇော်ထက်ရေ။ အစ်ကိုလာလည်သွားပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဘ၀လေးပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
5:18am အချိန်မတ် 27, 2013, တွင် aungzawoo မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
လာလည်သွားပါတဟ် အကိုရေ ကြည်နူးစရာလေးပါ
5:32pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 19, 2013, တွင် zin mar tun မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
5:08am အချိန်ဇန်န၀ါရီ 28, 2013, တွင် Aye Aye Cho မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မောင်လေးရေ လာလည်တုံးက အမ မကြိုဆိုနိုင်ခဲ့တာ စိတ်မရှိပါနဲ့နော် အခုနုတ်ဆက်ပါတယ် အမကို တရားဓမ္မတွေရှင်းပြပေးခဲ့တာလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် အချိန်ရတဲ့အခါတွေ တရားဓမ္မများလာရောက်ဆွေးနွေးပါအုံးမယ်နော် ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ....။
7:45pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 14, 2013, တွင် အိုဘယ့်နှင်း မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဆော၇ီးး ..လိုင်းကျသွားလို့ပါ ...
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်ကိစ္စလေ ...
အဲဒါ email လိပ်စာ ကို ...စာပို့ထားပေးပါ့မယ်...
ကူညီပေးတဲ့အတွက် ကျေးကျေးပါ ...
7:59am အချိန်ဇန်န၀ါရီ 13, 2013, တွင် Aye Aye Cho မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အမ လာလည်ပါ တယ် စာတွေလည်းအများကြီးဖတ်သွားပါတယ်
2:56pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 8, 2013, တွင် khinchitphyoaye မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
9:47pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 7, 2013, တွင် naynyoye.6@gmail.com မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:36am အချိန်ဇန်န၀ါရီ 1, 2013, တွင် သဒ္ဓါဖြူ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
5:49pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 15, 2012, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
တောသူမလေးရဲ့ အသက် ၂၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပွဲလေးကို
အရမ်းပဲဝမ်းသာပျော်ရွှင်ပြီး ပျော်စရာမွေးနေ့ရက်မြတ်လေးအဖြစ် ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်ရှင်
တောသူမလေးကို ယခုလိုမေတ္တာတရားရှေ့ထားပြီး ဆုတောင်းပေးကြသလို
ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းကြရမယ့် ရက် လ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်
တရားဓမ္မများကို မျှဝေ ဖတ်ရူလေ့လာရင်း
နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များ ဖြစ်ပါစေလို့
တောသူမလေးမှ ပြန်လည် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
1:18pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 2, 2012, တွင် ရဲမင်းထွန်း မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:51pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 26, 2012, တွင် အရှင်ဝိမလဝံသ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဒကာကြီးရေ ဦးဇင်း လာလည်သွားပါတယ်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဆိုတော့ ဘာသာရေးပိုစ့်တွေတင်တိုင်း အားပေးနေပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် ဒီထက်မက သာသနာပြုနိုင်ပါစေ။ ပိုစ့်တင်တဲ့အခါမှာလည်း ပါဠိတော်များကို သေချာစစ်ပြီးတင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးရဲ့ အတွင်းရန်သူများ ဆိုတဲ့ပိုစ့်လေးမှာ (အကရနံ) ဖြစ်နေပါတယ်။ အမှန်က (အကရဏံ) ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒကာကြီးကို ဆရာလုပ်တယ်လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ စေတနာ မေတ္တာဖြင့် အကြံပြုခြင်းမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။ သက်ရှည်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် သာသနာ့အကျိုး မိမိအကျိုး သူတစ်ပါးအကျိုးကို ဆထက်တိုးပြီး ဆောင်ရွတ်နိုင်ပါစေ။
4:18pm အချိန်အောက်တိုဘာ 30, 2012, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။